Daahirada Diin Ka Bixidda ee Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdifataax Xasan-Barawaani — August 29, 2020
Bariga dhexe ama si guudba ah waddamada Carbeed, iyo Geeska Afrika oo ay ku dhaqan tahay ummadda Soomaalidu ayaa ah kuwo qarniyo badan oo fac ka fac ku suntanaa dad diintoodu ama rumeysadkoodu uu yahay Islaam. Diintaasna aan beddelin, oo ka dhigtay sidii caadada iyo dhaqanka la iska dhaxlo. Se is beddelkii xoogganaa ee ka bilawday Galbeedka, oo ka soo bilaabmayey qarnigii 15-aad iyo 16-aad.
Kaas oo ka dhashay diinta Masiixiga oo la jaanqaadi kari waydday daah’furradii kala duwanaa ee aqoonta casriga ah. Iyo wadaaddadii diinta Masiixiga oo la bah noqday xukuumadaha dhiig’miiratada ah ee ka jiray Galbeedka. Ka dib kacdoonkaas aqoonta lagaga xoraynayo dabarrada diinta Masiixiga iyo calool’dillaacinta wadaaddada iyo xukaamta dulmiga badan ee is bahaystay, ayaa waxa ka dhashay hab dhisyo kala duwan oo aan haba yaraatee wax diin ah shuqul ku lahayn.
Qarnigii tagay horraantiisii, waxa dalka Masar ka bilaabmay dhaqdhaqaaqyadii ugu horreeyey ee loogu magac daray baraarujinta Islaamka ama Muslimiinta. Taas oo ujeedka ugu weyn ee ay lahaayeen uu ahaa soo celinta khilaafada Muslimiinta. Dadyowga Muslinka ah ee Bariga Dhexe bilawgii dar’darkaas xooggan ee loogu magac daray “ الصحوة الإسلامية ” waa ay raaceen, iyaga oo ka rejaynayay dhaqdhaqaaq baahiyadooda uga jawaabi doona.
Se waxa uu noqday mid lagu hungoobo, oo weliba dhibaato labaad oo macangagnimo iyo xagjirnimo diineed ah dib u abuura. Dhaqdhaqaaqyadaas oo Geeska Afrika soo gaadhay toddobaatamaadkii, xilligaas oo ay ahayd xilliyadii ay dacwaddaasi ugu xoogganayd ayaa iyaguna noqday kuwo beddelay dhammaan hab-fikir diineedkii ka jiray halkaas.
Soomaalidii ku dhaqnayd Geeska Afrika oo mad’hab ahaan haysatay Shaaficiyo Axkaamley ah, oo diintu wadaadka mooyee maqal ku tahay bulshada inteeda kale. Caqiido ahaanna haystay Ashaaciro, halka dariiqo ahaanna ay haysteen dariiqyo kala duwan oo Suufiyo ah sida: Axmediya, Qaadiriya, Sayliciya, Saalixiya, iwm. Waxa gebi ahaanba loo beddelay caqiido Wahaabiyo oo Sucuudiga ka soo bilaabantay qarnigii 18-aad.
Dhammaan dalalka Muslimkana waa lagu faafiyey Fikirka Wahaabiga, oo ay maal’gelinaysay dawladda Sucuudigu. Sideetamaaadkii ayaa dacwaddii loogu magac daray baraarujinta Islaamka, waxa ka faa’iidaystay dawladaha Galbeedka iyo Maraykanka, kuwaas oo u arkayay xoog lagu adeegan karo si loogu jebiyo garabka Hanti-Wadaagga ee Ruushku hoggaamiyo. Kaas oo xilligaas rabay in uu qabsado dalka Afgaanistaan.
Dhammaan dhaqdhaqaaqyadii Islaamiyiinta ee bilaabmay qarnigii hore ee tagay, waxa ay ku wada fashilmeen in ay keenaan hab-fasir diineed oo ka turjumaya baahida dhex taalla ummadda Muslinka. Isla sidaas oo kale ayaa Qoraaga reer Siiriya ee Dr. Maxamed Shaxruur waxa uu dhiganihiisa “Islaamku Waa Asal iyo Sawir” uu ku tilmaamay hadal u dhignaa sidatan:
“Gaabka bannaanaaday ee dadyowgii Galbeedka ilbaxnimadooda raacay, iyaga oo aan is waafajin ilbaxnimada Carbeed ee Muslinka iyo ta Galbeedka, taas oo keentay in ay fashilmaan loona arko dadyow qalaad oo shisheeye ah, ayaa waxa gaabkaas ka faa’iiidaystay kooxaha Islaamiyiinta ah oo iyaguna gaabkii bannaanaday ka buuxiyey diin dhaxaltooyo ah oo aan waaqic ahayn, oo ummado hore hab-fikirkoodii iyo sida ay u noolaayeen ka turjumaysa uun”.
Hadday noqon lahayd: Nikaax, Dhaxal, Xuduudo la oogo, hab-dhiska bulshada loo baahan yahay, siyaasadda, dhaqaalaha, iyo xataa nolosha shakhsiga ah, waa kuwo aan la socon karin xilligan aynnu nool nahay. Kolka aan lee yahay lama socon karaan heerka aynnu nool nahay, waxa aan u jeednaa waa fiqiga ee diinta badhaxa tiran nafteeda ma aha.
Farqi baana u dhexeeya diinta iyo fahamka la fahmay. Diintu waa nusuus qalalan, oo badhax tiran. Halka aqoontan kale ee fiqigu ka mid yahay ay yihiin fahamkii la dhugtay nusuusta diinta, oo saxmi kara ama khaldami kara. Mana jiraan wax lamataabtaan ka dhigaya in dib loo toosiyo oo la waafajiyo hab-nololeedkeenna maanta.
Fiqiga oo ah qeybta ugu ballaadhan ee dib u toosinta u baahan, waxa soo raaca waa fasirka Quraanka, oo isagu ah halka ugu xooggan ee fikirrada diimeed ka dab qaataan. Tafsiirku waa isla sida fiqiga oo kale, oo nusuustii Quraanka ahayd oo la dhugtay weeye. Fasirka aayadaha la saarayana ma noqon karo mid ku habboon xilli kasta iyo goob kasta.
Buggaagta tafsiirrada ee maktabadaha Muslinka ka buuxda, waxa ka dhex buuxa kumanaan khalad oo cilmi ah—oo wadaaddadu tab iyo maaro aan af-miishaarnimo iyo ta’wiilin mooyee ay wax kale u waayeen. Isla arrintan waxa la mid ah Xadiisyada oo iyaguna ah qeybta ugu baaxadda weyn ee saamaysa diinta iyo ku dhaqankeeda. Sugnaan la’aanta xadiisyadu iyo halbeegyada loo dhisay si loogu kala haadiyo ayaa iyaguna aan ahayn kuwo maanta ka turjumi kara heerkeenna.
Kumanaan xadiis oo la saxiixiyey xilli hore, ayaa maanta been ah oo ama Quraanka khilaafay ama caqliga ka hor imanaya, ama tijaabo rasmi ah. Ama si guudba noqon kara ku tiri kuteen aan sinnaba bulshooyin ka baxsan Jasiiradda Carbeed uga gadmi karin.
Caqabadaha kale ee haysta waa in ay iyaga laftoodu qaar ka mid ahi talax tageen, oo wax aan shaqo iyo shuqul toona isku lahayn ay isku sidkeen. Quraan badan iyo Saynis badan oo kaaf iyo kala dheeri ahna ay gadhka isu geliyaan qaarkood. Waxaana meeshaa ka soo baxa Quraan-Saynis ah, ama buug Saynis ah.
Hadhowtana haddii wax ka mid ahi aragtiyihii Sayniska ahaa iska beddelaan aan tab iyo maaro loo helayn. Waana muhiim in la kala garto waxa saynis ah iyo waxa diin ah, oo aan la isku qasin. Qodobka ugu weyn ee loogu aayi doono waa in ay diintii ka saareen yeedhiskii lagu yaqaannay wadaaddada. Taas oo ah tallaabooyinka ugu waaweyn ee wax ku oolka ah ee ay hore u qaadeen.
Sideedaba kala duwanaanshaha diintu waa wax tan iyo intii diimuhu bilaabmeen ka jiray dunida guudkeeda. Mana jiri doonto xilli ay dadka adduunka saaran oo dhami ay hal diin wada aaminaan. Balse qodobka mudan in dhug loo yeesho, ayaa waxa uu yahay in dad walba diintooda ay toosiyaan, oo dib u saxaan. Wixi deel’qaaf iyo iin ku ahna ay ka fogeeyaan, haddii lagu darayna ay ka saaraan oo ka hufaan. Si ummadda rumaysan diinta Islaamku u hesho nabad iyo horumarna waa in ay haggaajiyaan fikirrada diinta ee ka dhex jira.
Bulshooyinka Muslinkuna illaa ay toosiyaan diintooda, oo ka dhigaan mid ilbaxnimada iyo horumarka dunida la jaan’qaadi karta mooyee, si kale uma heli doonaan waxa ay rabaan iyo yoolka ay hiigsanayaan. Dib u dhaca iyo jahliguna waxa uu noqon doonaa wehelkooda rasmiga ah.
Gunta iyo gebagabadu waxa ay tahay daahirada diin ka bixidda sababta ugu weyn ee horseedday waa arrimahaas aynnu soo falanqeynay. Si guudna ah gaabka bannaanaaday oo la waayey cid buuxisa, iyo wadaaddo isku dayey in ay buuxiyaan gaabkaas oo ka buuxiyey khuraafaad iyo fahamyo duuggoobay, oo aan sinnaba ugu habboonayn heerka la nool yahay. Arrintaasina ay sababtay diin ka bax aan xad lahayn oo soo food’saaray bulshooyinka Muslinka ah.
Xalka keliyana waxa uu yahay, waa xididdada fahamyada Islaamka oo haggaajin iyo dib u sixid lagu sameeyo, lagana haadiyo oo laga hufo wixii u qalmi kara bulshada garaad ahaan iyo horumar ahaan iyo diin ahaanba. Wixii intaas ka soo hadhaana, la xooro si dhib dambe oo ka dhasha looga feejignaado.
Tags: Daahirada Diin Ka Bixidda ee Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika
Next post Maxaa Lagu Halbeegaa Dhaqanka iyo Akhlaaqda?
Previous post Hab-Qorista Qumman ee Af Soomaaliga